Vaovao - Ahoana no ahafahan'ny fantsona mifanentana amin'ny haben'ny haben'ny ban?
Fantsom-by sy bus
Traktera fambolena sy fantsona OTR
Fantsona bisikileta sy moto
Milomano fantsom-panatanjahan-tena amin'ny oram-panala
Ahoana no ahafahan'ny fantsona mifanentana amin'ny haben'ny haben'ny ban?
Ny fantsom-batana anatiny dia vita amin'ny fingotra ary malefaka be. Mitovy amin'ny balaonina izy ireo satria raha manohy mampirehitra azy ireo ianao dia manitatra hatrany mandra-pahatongan'ny vaky! Tsy azo antoka ny mampisondrotra fantsona anatiny mihoatra ny halavany sy ny haben'ny haben'ny torolàlana satria hihombo ny fantsona rehefa mihinjitra.
Ny ankamaroan'ny fantsona ao anatiny dia handrakotra soa aman-tsara ny haben'ny kodiarana roa na telo, ary ireo habe ireo dia matetika homarihina amin'ny fantsona anatiny ho samy hafa habe, na aseho toy ny tandavan-javatra. Ohatra: ny fantsom-bokatra misy kodiarana dia azo asiana marika 135/145 / 155-12, izay midika fa mety amin'ny haben'ny kodiarana na 135-12, 145-12 na 155-12. Ny fantsom-bozaka fanapahana bozaka dia azo asiana marika 23X8.50 / 10.50-12, izay midika fa mety amin'ny haben'ny kodiarana na 23X8.50-12 na 23X10.50-12. Ny fantsom-panafody ao anaty traktera dia azo marihina ho 16.9-24 sy 420 / 70-24, izay midika fa mety amin'ny haben'ny kodiarana 16.9-24 na 420 / 70-24.
MIHAOTRA NY FAHAMARINAN'NY TUBES INNER? Ny kalitaon'ny fantsona anatiny dia miovaova arakaraka ny mpanamboatra sy ny mpanamboatra. Ny fifangaroan'ny fingotra voajanahary, fingotra sentetika, karbonina mainty ary fitambarana simika hafa dia mamaritra ny tanjaka sy ny faharetany ary ny kalitaony amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny Big Tires dia mivarotra fantsona misy kalitao tsara izahay avy amin'ireo mpanamboatra izay efa nosedraina sy nosedraina nandritra ny taona maro. Mitandrema rehefa mividy fantsona anaty avy amina loharano hafa satria misy fantsona faran'izay ratsy kalitao eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Ny fantsom-kalitao tsy dia misy kalitao dia tsy hahomby ary handany vola bebe kokoa aminao na amin'ny fotoana iva na amin'ny fanoloana.
INDRINDRA inona no ilaiko? Ny valva dia misy endrika sy habe samihafa mba handraisana karazana fampiharana sy fikirakirana ny kodia. Misy sokajy efatra lehibe idiran'ny valves fantsona anatiny ary ao anatiny dia misy maodely valizy malaza vitsivitsy azo isafidianana: Valve Rubber Straight - Vato vita amin'ny fingotra no ampiasaina ary tsy lafo sy mateza. Ny valizy TR13 no be mpampiasa indrindra amin'ny fiara, ny tranofiara, ny quad, ny milina ary ny milina agri kely kokoa. Izy io dia manana taho valizy manify sy mahitsy. Ny TR15 dia manana vatan-tsolika midadasika kokoa / matavy ka ampiasaina amin'ny kodiarana izay misy lavaka valizy lehibe kokoa, mazàna dia milina agri lehibe na mpandeha amin'ny tany. Valve metaly mahitsy: vita amin'ny vy ny valve, ka matanjaka sy matanjaka kokoa noho ny mpiara-miasa aminy. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny fampiharana tosika avo lenta, ary rehefa misy ny risika kokoa noho ny valizy tratran'ny / voadonan'ny loza. Ny TR4 / TR6 dia ampiasaina amin'ny quad sasany. Ny mahazatra indrindra dia ny TR218 izay valizy agri ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny traktera satria mamela ny fantson-drano. Bent Valve Metal: Ny vy dia vita amin'ny vy, ary manana fihorakorahana ao anatiny amin'ny ambaratonga samihafa. Matetika ny fehikibo dia mitazona ny vongan-tsofina tsy hiharan'ny loza rehefa mihodina ny kodiarana, na mba tsy hidona amin'ny sisin'ny kodiarana raha voafetra ny toerana. Matetika izy ireo amin'ny kamio sy ny fitaovana fikirakirana ny milina toy ny forktrucks, kodiaran-tsarety ary kodiarana. Ny forklift dia matetika mampiasa valizy JS2. Masinina kely toy ny kamiao gony no mampiasa TR87, ary ny kamiao / kamio kosa mampiasa valves miforitra lava toy ny TR78. Valve-drivotra / rano - Ny valva TR218 dia valva vy mahitsy mamela ny rano (ary koa ny rivotra) halefa ao aminy mba handena ny kodiarana / milina. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny milina fambolena toy ny traktera.
Fantsona ao anaty ho an'ny fampiasana hafa - RAFTS AMIN'NY FAHASALAMANA, fantsom-panafody ETC Inner tubes dia zavatra tena ilaina ary manampy isan'andro izahay manampy ny olona izay mampiasa azy ireo amin'ny karazana fampiasana rehetra. Ka na mila fantsona ao anaty ianao mba hitsingevana eny amoron'ny renirano, hananganana ny famoronana rakitry ny fiantrana anao, na ho an'ny fampisehoana varavarankely fivarotana mahaliana dia faly izahay manampy. Azafady mifandraisa amin'ireo zavatra takinao ary hatoro anao amin'ny làlana tsara ny ekipanay. Amin'ny maha-mpanondro haingana anao dia manapaha hevitra hoe hoatrinona ny habe tianao amin'ny banga / lavaka eo afovoan'ny fantsona (antsoina hoe haben'ny sisiny ary refesina ao amin'ny Inches). Avy eo, manapaha hevitra manodidina hoe ohatrinona ny habeny tianao ho savaivony ny fantsom-be (ny haavon'ny fantsona raha aorinao eo ambony eo akaikinao izany). Raha azonao omena anay izany fampahalalana izany dia afaka manome toro-hevitra momba safidy vitsivitsy ho anao izahay. Azafady mifandraisa aminay raha mila fanampiana sy fampahalalana fanampiny.
Fotoana fandefasana: Aug-15-2020
Efitra 1608 Dingye International Mansion
Lalana 54 Mosko, faritra fivarotam-barotra Qingdao